BGR - - Tele RELAY တစ်ခု "က Black Panther 2" ပထမ MCU ရုပ်ရှင်အဆင့်5၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment BGR - "" Black က Panther2"ပထမ MCU ရုပ်ရှင်အဆင့်5၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်
BGR - "က Black Panther 2" ပထမ MCU ရုပ်ရှင်အဆင့်5၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်, အံ့ဩခြင်းထင်ရှား 10 ခေါင်းစဉ်ထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိ ကြောင်း41 နိုဝင်ဘာလမှမေလ 2020er5ထံမှပြေးသောအံ့ဩခြင်းရုပ်ရှင်ရုံ 2021 အဆင့်ဠာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအဆင့်စဉ်အတွင်းယခင်သုံးမတူဘဲ, အ MCU ရုပ်ရှင်၏တူညီသောစာလုံးများကို (နှင့်သရုပ်ဆောင်များကို) နဲ့အတော်ကြာတီဗီစီးရီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်အရာ, ဒစ္စနေး + ဖြင့်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားလိမ့်မယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာအံ့ဩခြင်းကိုလည်းနောက်ဆက်တွဲအတည်ပြု ] က Black Panther ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း, et က Galaxy ၏ the Guardians ဤ4အဆင့်တွင်ထည့်သွင်းမထားပေမဲ့, ပြင်ဆင်မှု၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါအံ့ဩခြင်းအတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့, Black က Panther2မာတင် Freeman ကနဲ့မကြာသေးမီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအတိုငျး,5ဇာတ်စင်၏ပထမဦးဆုံးဇာတ်ကားများထဲမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကီဗင် Feige သူကြေညာခဲ့သောကြောင့်ရုပ်ပြ-Con ပြီးနောက်ရှင်းပြခဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးခေါင်းစဉ်။ အဆင့်4အရာစင်မြင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲအပေါ်တညီတညွတ်တည်းမတစုံတခုကိုမျှ, အ5သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင်ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါစာရင်းကိုကျွန်မအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်းအစုံ, ဒါပေမယ့်လည်းခေါင်းစဉ်မဲ့စီမံကိန်းကိုပါဝင်သည် ဓါးရွက် နှင့်ရုပ်ရှင် X-Men et Fantastic Four .
အဆိုပါစတူဒီယိုမန်နေဂျာကအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်နေကြသည်အားလုံးပေးသော၏ပစ်လွှတ်ရက်စွဲများအကြောင်းကိုဘာမျှမ, 8 ဖေဖော်ဝါရီလ 2022,6မေလ 2022 နှင့် 29 2022 ဇူလိုင်လအပါအဝင် panel ကနေစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဟုဆိုသည် ပစ်လွှတ် MCU ရုပ်ရှင်စတငျရ။ ကျနော်တို့ကောင်းစွာရုပ်ပြ-Con အံ့ဩခြင်းဖြစ်ရပ်မတိုင်မီထိုအရက်စွဲများကိုသိရ
ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင် Black က Panther ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ 16 2018 အပေါ်ဖန်တီးခဲ့အံ့ဩခြင်းအဘို့အကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှု
။ စီအိုင်အေအေးဂျင့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားသူကို Freeman က, Everett ရော့စ်သည် MCU - သရုပ်ဆောင် ပြန်ပြောပြ အဆိုပါ Uproxx , သူ့အသိပညာမှ, ထိုပစ်ခတ်မှု Black က Panther22021 စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာအင်တာဗျူးတစ်ဦးထံမှလဲလှယ်ဖြစ်ပါသည်:
ကျနော်တို့က Black Panther တစ်စီးရီးနှင့်အတူအဘယ်မှာရှိကြသနည်း သင်ပစ်ခတ်မှုစတင်နိုင်မည်အခြိနျအကြောင်းကိုကြားသိဖူးသလော
နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့နောက်နှစ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာကျနော်တို့လာမယ့်က Black Panther လုပ်သည့်အခါဖြစ်စေ 2021 တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကငါသိအားလုံးပါပဲ။
Ross က Everett သူအကျပ်အတည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်?
ငါဟုတ်တယ်, ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမမျှမတဦးတည်းကသူသေပြောတယ်။
စိတျထဲမှာရှိသမျှသောအမှုနှင့်အတူမြင်ရဖို့အံ့သြစရာဖြစ်မဟုတ်ဘူး Black က Panther2ပစ်ခတ်မှုအစောပိုင်း 2022 အတွက်တစ်ချိန်ချိန်စတင်သည်ယူဆစောစော 2021 အတွက်ပြလိမ့်မည်။
အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကြံစည်မှုထံမှမျှော်လင့်ထားရန်မစိတ်ကူးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဓိကဇာတ်ကောင်ယူသင့်ပါတယ်ရိုင်ယန် Coogler Chadwick Bosswick နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်သည့်ကာတွန်းကားစီးရီးအတွက် Wakanda ၏ငယ်ရွယ်ရှငျဘုရငျ၏စကားသံကိုစာရင်းအပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် အဘယ်အရာကို ... အကယ်. ? အဘယ်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနွေရာသီ 2021 ဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒစ္စနေး + ။
Image ကိုရင်းမြစ်: အံ့ဩခြင်း
အသစ် Netflix နဲ့သည်းထိတ်ရင်ဖို "ဒီငါ-Land" "ပျောက်ဆုံးသွားသော" ကျွန်တော်တို့အလေးအနက် flashbacks ပေးသည် - BGR